M-Azụmaahịa na-aga n'ihu | Martech Zone
Obi abụọ adịghị ya. Ọtụtụ ndị ọrụ na-azụ mbadamba ma na-eji ha maka azụmahịa e-commerce n'ihi mma ọ na-enye. Akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na eMarketer na-akwado nke a ma na-ebu amụma a anya na azụmahịa mbadamba, na-eme ka azụmahịa m-azụmahịa ghọọ ụlọ ọrụ $ 50 ijeri na-esote afọ.
Ego ahia ahia zuru oke, tinyere mbadamba na smartphones, na 2012 bụ $ 24.66, na ọnụ ọgụgụ a nọchiri anya 81% mmụba site na ọnụ ọgụgụ 2011. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ na-emenye ụjọ.
Nkwupụta eMarketer na-ebu amụma na mkpokọta ecommerce niile sitere na ngwaọrụ mbadamba naanị iji metụ $ 24 ijeri na njedebe nke 2013 wee fọrọ nke nta ka ọ okpukpu abụọ n'ime otu afọ iji metụ $ 50 ijeri na njedebe nke 2014. Mkpokọta ahịa m-commerce ga-eguzo n'ihe dịka $ 39 ijeri na 2013.
Na 2013, a na-atụ anya na 15% nke ahịa niile ga-abịa site na ngwaọrụ mkpanaka, yana naanị mbadamba naanị maka 9% nke achịcha a. Site na 2016, mbadamba naanị ga-aza maka a dị ịrịba ama 17% nke niile ahịa.
Otu nnukwu ihe kpatara oke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mbadamba mbadamba, ebe ọtụtụ mmadụ na-azụta ngwaọrụ ọhụrụ a. Nke a pụtara ìhè site n’oge ezumike a kwubiri. Daybọchị Krismas 2012 hụrụ 17.4 nde ihe nrụpụta ngwaọrụ ọhụrụ, budata site na nde 6.8 nde ngwaọrụ ọhụrụ na 2011. Na omenala, nha nke ngwaọrụ ohuru abụrụla ekwentị anọ maka kọmpụta ọ bụla. Mana ubochi ekeresimesi puputara ihe ijuanya ozo, mgbe 2012% nke ihe ohuru ohuru di na nde 49 gbara oru bu mbadamba.
Ndị ahịa chọrọ ịnọgide na-azụ ahịa na afọ ndị na-abịanụ agaghịzi enwe ike ileghara ahịa mbadamba nkume anya. Ọ bụ ezie na nke a na-elekwasị anya na azụmahịa m, ọ dị mkpa ịghọta mmetụta nke nọmba ndị a site na ntụgharị ntụgharị ndị ọzọ. Usoro ahia ahia na-achọ ọtụtụ isi aka na atụmanya iji nweta nzukọ nọdụ ala. Ọ bụrụ na etinyere ọdịnaya mkpanaka gị, mgbe ahụ ha enweghị ike inyocha, nyocha, ma mata akara gị. Na-ebuli saịtị gị mkpali. Nwee oku doro anya ma kwenye. Banye na egwuregwu!
Tags: content Marketinge-azụmahịam-azụmahịaMobile na Mbadamba ụrọmbadamba
Ajụjụ iri na abụọ maka imepụta peeji ụlọ